profil aluminium ho an'ny varavarankely -- fscyal.com
ChangYuan Aluminium dia afaka manamboatra karazana varavarana rehetra &mombamomba ny alim-baravarankely ho an'ny tsena any ivelany, manomboka amin'ny fikosoham-bary vita hatramin'ny fanodinam-bolo, elektroforesis sy fonosana vovoka.
Alefaso mailaka aminay Mifandraisa izao Sintomy ho PDF
Fampidirana ny mombamomba ny Aluminium ho an'ny varavarana & varavarankely
ChangYuan Aluminium dia afaka manamboatra karazana varavarana rehetra &mombamomba ny alim-baravarankely ho an'ny tsena any ivelany, manomboka amin'ny fikosoham-bary vita hatramin'ny fanodinam-bolo, elektroforesis sy fonosana vovoka. Ny mombamomba ny aliminioma dia vokatra vita amin'ny aliminioma sy singa hafa mampirongatra azy. Matetika dia arotsaka ho casting, vokatra sandoka, Nampandamòka an'izany, takelaka, fehin, fantsona, hazo, mombamomba, Sns, ary avy eo namboarina tamin'ny famolahana mangatsiaka, tsofa hazo, ary atsofony, mivory, sy fandokoana. Ny singa vy lehibe dia ny alimo, izay ampiana singa alloying sasany hanatsarana ny fananan'ny aliminioma.
12 hateviny: 0.4mm 0,5mm 0.6mm,0.8MG,1.0MG,1.2MG,1.4MG,2.0MG,3.0mm sns.
Fanasokajiana ireo profil aluminium ho an'ny varavarana sy ny varavarankely
Ao amin'ny Aluminium ChangYuan, miantso varavarana isika & varavarankely dia varavarankely& varavarankely raha ny endriny sy ny firafitry ny mpankafy dia vita amin'ny alim-bolan'ny aliminioma firafitra aliminioma. Ny fanasokajiana ny profil aluminium ho an'ny varavarana & varavarankely dia mety ho toy izany:
1. Fitaovana amin'ny frame, izay eo am-baravarana sy ny varavarankely fitaovana, ny fitaovana mifandray amin'ny rindrina. Ny tena mampiavaka azy dia ny tampon izay mifanena amin'ny rindrina dia fisaka ny ankamaroany, raikitra amin'ny rindrina, ary tsy azo afindra.
2. Fan fitaovana, ny fitaovana azo sokafana amin'ny varavarana sy ny varavarankely. Mampiavaka azy ny fahaizany mihetsika.
3. Window-fanohanana, ny mahitsizoro noforonina avy amin'ny akora frame dia mizara ho plurality ny fitaovana mahitsizoro kely. Ny tena varavarankely-fanohanana: raikitra amin'ny fitaovana vita amin'ny frame, ny sandoka-fanohanana am-baravarankely: raikitra amin'ny mpankafy.
4. Tsipika fanerena, ny sisin'ny efitrano, ny piraofilina ampiasaina hanamboarana ny vera. Tsipika manindry boribory: mety amin'ny 45 stitching diplaoma. Tsipika faneriterena toradroa: mety amin'ny 90 stitching diplaoma. Amin'ny maha-mpamatsy ambony ny profil aluminium ho an'ny varavarana & varavarankely any Shina, ChangYuan Aluminium dia afaka manome ny karazan'ireto vokatra mombamomba aluminium ireto amin'ny tsena any ivelany, Azontsika atao koa ny manolotra ny anodizing, elektroforesis sy fonosana vovoka amin'ny profil aluminium.
ttombony amin'ny roduction:
Ao amin'ny Aluminium ChangYuan, ny mombamomba ny aluminium ho an'ny varavarana & Ny varavarankely dia manana ireo tombony ireo
1. tsara insulateur
Firaka alimina mahazatra K = 207 W /(m2k)
Vaky alimo tetezana alimina K = 2 ~ 4 W /(m2k)
2.tsara insulation feo
Famolavolana rafitra tsara sy kofehy tery.
3.tsara tery ny rivotra
4. tsara tery ny rano
5. fanoherana ny rivotra
Ny haingon-trano eo amin'ny lafiny roa dia firaka aliminioma avokoa, izay mahatohitra fanoherana ny tsindry rivotra ary mety hahatratra 7 naoty varavarana sy varavarankely vita.
Ny firaka aliminioma dia fitaovana vy ary tsy mirehitra. Nylon afovoany 66 dia ampiana amin'ny flame retardant ary tsy mirehitra. Ekena ho fitaovana fampidirana afo
7.fanoherana ny halatra
Varavarana sy varavarankely misy alimo vita amin'ny alimo, feno fitaovana tsara, ka tsy afaka manao na inona na inona ny mpangalatra.
-Mihoatra ny 20 taona amin'ny indostrian'ny vokatra aluminium
-Betsaka ny traikefa amin'ny orinasa Export,toy ny UK, Frantsa, Nosy La Réunion, Aostralia, Bali, INDE
-Toeram-pamokarana roa, miantoka ny fandefasana ara-potoana
-Ekipa amidy indrindra, serivisy aorian'ny fivarotana sy ny fanohanana ara-teknika
-Ireo akora vita rehetra nataonay, miantoka ny fifehezana kalitao
Fitaovana fananganana, Varavarana alim-baravarana tapaka &varavarankely, Varavarana aliminioma fiatoana tsy mafana & varavarankely, Hotely, Trano birao sy trano. VARAVARANA & rafitry ny varavarankely.
Ekipa mpivarotra manome anao ny fanohanana
Ny ekipan'ny QC dia miantoka ny vokatra tsirairay amin'ny toe-javatra lavorary
Ekipa teknika no manohana ny olana ara-teknika
Aorian'ny fampanantenan'ny ekipa mpivarotra dia manome anao traikefa tsara kokoa amin'ny varotra
Hamarino tsara fa ara-dalàna ny ara-nofo rehetra
1.Inona no tokony hataoko alohan'ny hametrahako baiko?
Miresaka amin'ny ekipan'ny varotra anay, alefaso ny sary na lazao anay ny zavatra takinao, dia hanokatra fisie ho anao izahay, namboarina ny vokatrao.
2.Haharitra hafiriana ny baiko iray?
Rehefa avy nanamarina ny santionany alefanay aminao, handray izany 10-15 andro.
3.Inona no fitsaboana azo atao amin'ny profil aluminium?
Anodizing, vita vita, fonosana vovoka sy electrophoresis
Tags：varavarana firaka alimo, varavarankely sy varavarana aluminium, varavarana aluminium, profil aluminium, varavarankely aluminium, mombamomba ny aluminium indostrialy
Mombamomba ny aliminioma ho an'ny atitany anatiny
Mombamomba ny aluminium ho an'ny rindrina ambainy